ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: မြန်မာ့ပညာရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု အရေးတကြီး လိုအပ်နေဟု ဒေါက်တာသိန်းလွင် ပြော (ရုပ်သံ)
မြန်မာ့ပညာရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု အရေးတကြီး လိုအပ်နေဟု ဒေါက်တာသိန်းလွင် ပြော (ရုပ်သံ)
မြန်မာပြည်ရဲ.ပညာရေး စနစ် ပြောင်းလဲဖို.အရေးကြီးတာ
မှန်ပါတယ်၊ ဒါက ကြာအုံးမှာ ၊
... လောလောဆယ် ရန်ကုန်ကစာသင်ကျောင်းတွေ
(အတော်များများ) မှာ ကျောင်းသားတွေ မူးယစ်ဆေးပြား
တွေ သောက်ပြီး စာသင်ချိန် ခုံပေါ်မှောက်ပြီး အိပ်ကြတယ် ၊
... ဆရာ ၊ဆရာမ တွေ ကကျောင်းအုပ်ကြီးဆီ တင်ပြရင်လည်း အလွန်ဆုံး မိဘခေါ် ၊ညှိနှိုင်းနဲ.ပြီး သွားတယ်၊ အဲဒီဆရာမ ကိုအပြင်မှာ ရန်ရှာတယ် ၊
လှိုင် အ.ထ.က (၄) မှာ ဆို ကျောင်းသား က မူးယစ်ဆေးပြား
တွေ သောက်ပြီး စာသင်ချိန် ခုံပေါ်မှောက်ပြီး အိပ်တယ် ၊
ဆရာမက စာသင်ချိန် မအိပ်နဲ.ဆိုပြီး နှိုးမိတာနဲ. တင်
ကျောင်းသား က အခန်းပြင်ထွက် ၊ မြေကြီးပေါ်က အုတ်
ခဲ ပိုင်းကောက်ပြီး " ခင်ဗျား ထွက်လာခဲ. " ဆိုပြီး ကျောင်းသားကခေါ်ထုတ်တာ ခံရဘူးတယ် ၊
.. ကြားတဲ.သူ ယုံနိုင်ဖွယ်တောင်မရှိဘူး ၊
.... ဆရာမတွေဆိုတာလည်း ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီး
ကို မလွန်ဆန်နိုင်ကြဘူး ၊
.. မ၀ရေစာ လစာလေးကိုဘဲ ဖက်တွယ်နေကြတယ် ၊
.. ကျောင်းစစ်ဆေးရေး အရာရှိတွေလာရင်လည်း
ရှောင်တခင် မဟုတ်ဘဲ ကြိုအသိပေးထားလို.ကျောင်းက
အစားအသောက် ၊ လက်ဆောင်ထုပ်တွေနဲ.စောင်.ကြရတယ် ၊
.. ကျောင်းအုပ်ကြီး အတိုင်ခံထားရရင်တော. စာအိပ်နဲ.တကွပေါ. ၊
.. ကျောင်းအုပ်ကြီး မဟုတ်တာလုပ်လို. အတိုင်ခံထားရလည်း မြို.နယ်ပညာရေးမှူး နဲ. လာရောက်စစ်ဆေးတဲ. အဖွဲ. တွေ ကို
ပေးကမ်းတာနဲ. ကိစ္စ ပြီးသွားကြတယ် ၊
**** မြန်မာပြည်ရဲ. ပညာရေးလောက က အများ
ထင်တာထက် ပိုပျက်စီးနေတယ် လို. ****